Filmy News | Artist Khabar | Page 3
Filmy News	प्रियंका र आर्यन के साँच्चै नै कलेस ज्वाईन गरेका हुन् त ?	माघ, काठमाडौं । अभिनेत्री प्रियंका कार्की र अभिनेता आर्यन अधिकारीको कलेज ड्रेसको तस्बिर सार्वजनिक भएसँगै कतिले कलेज ज्वाईन गरेकै हुन् भन्ने दुविधा सिर्जना गरेका छन् । यो सार्वजनिक तस्बिरमा उनीहरु कलेज ड्रेसमा किताबसँगै भेटिएका छन् ।
तर यी जोडी रियलमा नभएर रिल लाईभ मै भेटिएका हुन् । केहि दिनदेखि छायांकनमा जुटेको चलचित्र 'बटरफ्लाइ'को एक..	अल्मोडाको स्वरमा इन्डलेस लभ’को रोमान्टिक गीत सार्वजनिक (भिडियो)	माघ, काठमाडौं । चलचित्र ‘इन्डलेस लभ’को एक गीत सार्वजनिक गरीएको छ । आउँदै गरेको भ्यालेन्टाइनलाई ध्यान दिँदै चलचित्रको रोमान्टिक ‘आई एम इन लभ’ बोलको प्रेमगीत रिलिज गरिएको हो ।
सार्वजनिक गीतमा अल्मोडा राना उप्रेती र सुमन गुरुङको स्वर रहेको छ । गीतमा जयन्त शर्माको शब्द तथा संगीत छ । यशराज ढकालको प्रस्तुतीमा तयार भएको यो चलचित्रलाई साजन..	‘दर्पण छाया २’ को ट्रेलर हेर्नुस् (भिडियो)	माघ, काठमाडौं । चलचित्र 'दर्पण छाया २' को ट्रेलर सार्वजनिक गरीएको छ । साहारा फिल्मस्को ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्रलाई तुलसी घिमिरेले निर्देशन गरेका हुन् ।
प्रेमका अनेक रंग देखिन सकिने सिनेमाको सार्बजनिक ट्रेलरमा त्रीकोणात्मक प्रेम कथा प्रस्तुत गरिएको छ । संगीतमा संघर्ष गरिरहेका पुष्पलको प्रेम संगै उनको संगीतयात्रा र प्रेम सिनेमाको..	भोलीबाट आउने चलचित्र ‘डाइङ क्यान्डल’को प्रिमियर	माघ, काठमाडौं । चलचित्र ‘डाइङ क्यान्डल’को प्रिमियर गरीएको छ । भोली शुक्रबार बाट प्रदर्शन हुने यस चलचित्र काठमाण्डौको वीग मुभिजमा चलचित्रका कलाकार, निर्माता, निर्देशक, पत्रकारका साथमा प्रिमियर गरीएको हो ।
प्रिमियरमा लाक्पा सिंगे तामाङ, अर्पण थापा, श्रृजना सुब्बा, निर्माता तथा छायांकार रविन आचार्य लगायत हलमा देखिएका थिए ।
चलचित्र..	‘धनपति’लाई निर्देशक दिपेन्द्र के. खनालले नै खिच्ने	माघ, काठमाडौं । चलचित्र धनपति’लाई निर्देशक दिपेन्द्र के. खनालले नै खिच्ने भएका छन् । दुर्घटना परेपछि आराम गरीरहेका छायांकार निरज कंडेललाई रिप्लेस गर्दै दिपेन्द्र आँफैले चलचित्र खिच्ने भएका हुन् ।
बिहिबार बिरगन्जबाट छायांकन सुरु गर्ने दिपेन्द्रले जानकारी दिएका छन् । ‘एउटा निर्देशक राम्रो छायांकार पनि हुनसक्छ भन्दै उनले छायांकनको..	रेखा र आर्यनलाई लिएर ‘कसो कसो माया बस्यो’ बन्ने	माघ, काठमाडौं । नायिका रेखा थापा र नायक आर्यन अधिकारी लाई लिएर चलचित्र 'कसो कसो माया बस्यो’ बन्ने भएको छ । सविर श्रेष्ठले निर्देशन गर्ने यस चलचित्रको आउँदो बैशाख बाट छायांकन शुरु गरीने बताइएको छ ।
काइट्स इन्टरटेन्मेन्टको ब्यानरमा रामहरि धितालसँगको सहकार्यमा यो चलचित्र बन्न लागेको हो । यसअघि सविरले रामहरिसँग मिलेर ‘तथास्तु’ नामक..	‘लुट–२’ को केहि सम्बादमा सेन्सरबोर्डको कैंची	माघ, काठमाडौं । चलचित्र ‘लुट–२’ ले पीजी सर्टिफिकेट पाएको छ । चलचित्रमा समावेश केहि दृश्य तथा संवादमा सेन्सरबोर्डले कैंची लगाउँदै चलचित्र हेर्न बच्चाले अभिभावकसँग जानुपर्ने भन्दै पीजी सर्टि्फिकेट दिएको हो ।
फागुन १२ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने चलचित्रमा सौगात मल्ल, दयाहाङ राई, विपिन अधिकारी लगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् । निश्चल..	‘लाल्टिन’को रिलिज मिति सर्र्याे, अब जेठ २६ मा आउने	माघ, काठमाडौं । यहि आउँदो चैत्र १८ देखि प्रदर्शन हुने भनिएको चलचित्र ‘लाल्टिन’को प्रदर्शन मिति पोस्टपोन्ड भएको छ । अब यस चलचित्र आउँदो बर्षको जेठ २६ गतेबाट प्रदर्शन हुने बताइएको छ । चलचित्रको नयाँ टिजर सार्वजनिक गर्दै नयाँ प्रदर्शन मिति सार्वजनिक गरिएको हो ।
देव कुमार श्रेष्ठको निर्देशनमा तयार भएको यो चलचित्रमा दयाहाङ राई , प्रियंका..	‘मेरो पैसा खोइ’को छायाँकन शुरु	माघ, काठमाडौं । बलिउड निर्देशक विवेक शर्माको पहिलो नेपाली चलचित्र ‘मेरो पैसा खोइ’को छायाँकन सुरु भएको छ । रोज राणाले निर्माण गर्ने यस चलचित्र मंगलबार पुतली सडकमा पहिलो दृश्य कैद गर्दै चलचित्र सुरु गरिएको हो । यस अघि चलचित्रमा एक नायिकाको खोजि गरीएको भनिएसँगै निर्माण युनिटले छुल्ठिम गुरुङलाई नायिकाको रुपमा फाइनल गर्दै छायाँकन सुरु..	‘थ्रि मंकिज’ चलचित्र आजबाट हलहलमा लाग्दै	माघ, काठमाडौं । चलचित्र 'थ्रि मंकिज' आज शुक्रबार बाट देशभरीका हलहरुमा लाग्दै छ । आज माघ २१ गतेबाट चलचित्र नेपालभरीका करिब ६० भन्दा बढी हलहरुमा एकैसाथ चलिरहेको चलचित्र युनिटले जानकारी दिएको छ ।
यस अघि माघ २८ गतेबाट चल्ने भनिएको यस चलचित्रको रिलिज मिति एकसाता अघि नै सारी २१ गते बनाइएको हो । चलचित्रको पहिलो शो सुरु भइसकेको र दर्शकको उल्लेखनिय..	Pages:«1234567...39»